Safar gaar ah: Lammaanuhu waxay caawiyaan shimbiraha kiwi inay duulaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » Safar gaar ah: Lammaanuhu waxay caawiyaan shimbiraha kiwi inay duulaan
Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Waajib ah • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Fursad safar oo cusub iyo mid gaar ah oo New Zealand ah.
Bishan, lamaane u safraya New Zealand waxay bilaabeen khibrad safar oo cusub oo gaar ah si ay uga caawiyaan ilaaliyeyaasha inay soo ururiyaan oo ay dib u sii daayaan qaar ka mid ah dadka ugu caansan uguna dhifsan New Zealand - shimbiraha kiwi.
Fursada cusub ee safarka waxaa soo diyaariyey khubaro ku takhasustay socdaalka oo degan UK oo jooga New Zealand In Depth iyadoo lala kaashanayo la-hawlgalayaashooda Auckland IDNZ waxaana markii ugu horreysay khibrad u yeelan doona dalxiise xilligan maadaama digaagga kiwi ay soo baxayaan.
Agagaarka Waaxda Ilaalinta (DOC) ilaaliyaha, khibradda cusub ee safarka gaarka ah waxay arki doontaa Jonathan iyo Marieke Greenwood oo la socda Auckland Seaplanes, oo marka hore u duulaya Jasiiradda Rotoroa si ay uga soo qaataan tiro kiwi ah kadibna u duulaan Motutapu si ay u sii daayaan.
Duulimaadku wuxuu u kaxeeyaa Jasiiradda Rotoroa isagoo ku riyaaqaya aragtiyada qallafsan ee Gacanka Hauraki laga bilaabo bartamaha magaalada Auckland iyada oo loo sii marayo Rangitoto Volcano, oo ah kan ugu yar 50 ee aagga. Iyada oo laga dhex arkayo godka volcanic ka hor inta uusan sii dhaafin xeebta Waiheke ilaa Jasiiradda Rotoroa.
Marieke Greenwood waxay tiri; - Markii ugu horraysay ee aannu maqalno inay suurtagal tahay, waan rumaysan kari waynay. Dad badan oo reer New Zealand ah waligood waligood kuma arkin kiwi duurka, sidaa darteed in loo dhawaado oo laga caawiyo waaxda dhowrista mashruuca labadaba waa sharaf dhab ah, waana wax aad u xiiso badan. ”
Mashruuca dib udajinta ayaa ah mashruuc wada jir ah oo ay wada fuliyeen Auckland Seaplanes, Auckland Zoo, Rotoroa Island iyo waaxda daryeelka si loo ilaaliyo noocyada kiwi ee asalka ah iyadoo loo raray shimbiraha inta lagu gudajiray waqtigii rootida laga bilaabo Janaayo ilaa Maarso
Kiwi-yada loo raray hal-abuurnimadan waxaa markii hore laga sii daayay Jasiiradda Rotoroa Sanctuary dhawr sano ka hor markii ay culeyskoodu ahaayeen 450 garaam oo ay haatan u kortay 1.6 / 2.5 kg ayna awoodaan inay iyagu is-difaacaan. Si loo kala duwo hidda-wadaha hadda waxaa qaab duulimaad ah loogu qaadayaa gurigooda cusub, halkaas oo duco Maori ka dib, loogu sii daayo duurka.
"New Zealand waa meel sixir ah oo lagu safro waxaanan ku faaneynaa helitaanka iyo gaarsiinta runta hadalka iyo khibradaha shaqsiyeed," ayuu raaciyay Paul Carberry, oo ah aasaasaha New Zealand In Depth. "Tani waa hal tusaale oo kooxdeena dhulka jooga ay awood u yeesheen inay mucjiso sameeyaan si ay ugu oggolaadaan kuwa Greenwood-ka inay u galaan halgamaagan sixirka ah."
Waxaa la rajeynayaa in safarkan uu noqon doono kii ugu horreeyay ee badan oo lagu taageerayo barnaamijka dib u dejinta kiwi iyada oo loo marayo kooxda safarka ee New Zealand In Depth maadaama ay si dhow ula shaqeeyaan Auckland Seaplanes iyo DOC si ay u sii wadaan taageerada barnaamijka.
Paul Carberry, oo ah aasaasaha New Zealand In Depth, ayaa intaas ku daray: "Khibraddan cusub waxay ku biireysaa howlo kale oo dhowr ah oo dalka oo dhan ah oo isu keenaya safar raaxo iyo daryeel, waana wax aan ku faaneyno inaan ku takhasusno. ama taageerida xakamaynta noocyada aan asaliga ahayn ee Okarito - waxaa jira fursado badan oo cajiib ah oo lagu taageerayo laguna lug yeelanayo ilaalinta New Zealand. ”
New Zealand In Depth sidoo kale waxay ku taageertaa, tabarucaad joogto ah, Eco Farewell Spit, Okarito Nurseries, WJet iyo barnaamijkeeda dabin ee ku teedsan iyo Kaikoura Wildlife Center.
Maalinta Caalamiga ee Sushi 2021: Wasabi ayaa ka mid noqotay Mareykanka ...